Telesom oo maal-gelisay mashruuc lagu maal-galinaayo dhalinyaro la timid hal-abuur ganacsi – WARSOOR
Hargeysa – [warsoor] – Shirkadda Telesom ayaa maal-galisay mashruuca lagu maal-galinaayey dhalinyaro la timid hal-abuur ganacsi, waxaana mashruucan hirgalisay hay’adda innovate ventures.
Hay’adda Innovate Ventures ayaa soo agaasintay xaflad balaadhan oo ay si weyn uga soo qayb-galineen marti-sharaf kala duwan oo iskugu jiray masuuliyiin ka socday shirkaddaha waaweyn ee dalka, saraakiil hay’addaha caalamiga ah iyo dhalinyaro leh ganacsiyo kala duwan. Xafladan ayaa ka dhacday huteel Maansoor ee magaaladda Hargeysa maalinimadii Axadda ee 29 October 2017.
Cabdiwahaab Maax, Agaasimaha horumarinta Arimaha Bulshadda ee shirkadda Telesom ayaa ka hadlay kaalinta ay shirkadda Telesom ay ku lahayd mashruucan hal-abuurka ganacsiga dhalinyaradda waxaanu yidhi, “ Telesom ahaan, mashruucan bilowgiisii ilaa maanta waxaanu nahay maal-galiyaha ugu weyn ee maxaliga ah ee maal-galiya hay’adda Innovate Ventures, waanan maal-galin doonaa annagoo ujjeedada ugu weyn ee aanu u maal-galinaynaa ay tahay in dhalinyaradeenu ay yeeshaan hal-abuur iyo inay la soo baxaan. Waxaa naga go’an in aanu maal-galino dhalinyaradda caqligooda iyo aqoontooda, waxaanu balan-qaadaynaa in aanu maal-galino cidkasta oo arintaasi ku hawlan”.
Agaasimaha hay’adda Innovate Venture Dr. Cabdiqani Diiriye ayaa ka hadlay barnaamijkan ay hay’addiisu dalka ka hirgalisey iyo sida uu hal-abuurka ganacsiga eedhalinyaradda uu barnaamijkani uu saamayn ugu yeeshay inay guulo ka gaadhaan hal-abuuryadda ganacsi ee dhalinyaradda. Dr. Cabdiqani ayaa sharaxaad ka bixiyey noocyadda adeegyadda ah ee ay siiyaan dhalinyaradda ka qayb-galay barnaamajikan Innovate Venture, waxaanu sheegay in sanadkan ay soo dalbadeen 520 halbuur ganacsi, lagana soo xulay 20 shirkaddood oo kaliya kuwaasi oo tababar iyo dhisid lagu wadday muddo afar bilood ah, maanta afarta shirkadood ee ku guulaysta la siin doono abaal-marin maal-galineed oo lacag ah.
Hay’adda innovate ayaa guddi ka mid ah masuuliyiintii ka soo qayb-galay munaasibadda u magacowday guddida xulista guulaystayaasha barnaamijkan hal-abuurka ganacsiga, waxaana halkaasi abaal-marin lagu lacageed guddoonsiiyey shirkaddihii ku guulaystay barnaamijka.